USUZO NGE-AKHAWUNTI YAKHO | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Sisebenzisa amakhukhi ukuze sithuthukise ukujabulela kwakho iwebhusayithi yethu. Ngokuqhubeka nokusebenzisa iebhusayithi yethu, uvuma ukusebenzisa kwethu amakhukhi. Ungashintsha amasethingi akho amakhukhi nganoma yisiphi isikhathi.QhubekaThola okunye okuningi
Ikhaya Explore USUZO NGE-AKHAWUNTI YAKHO
USUZO NGE-AKHAWUNTI YAKHO
Lesi sigaba sihlinzeka ngemibuzo eyejwayelekile ngokubhalisa, ukungena kwi-website, nokungena kwi-akhawunti yakho
Ukubhalisa Ezichazamazwini zakwa-Oxford
Uma ungumsebenzisi omusha, kuyodingeka ukuthi ubhalise Ezichazamazwini zakwa-Oxford ukuze ungene kwi-akhawunti yakho.
Ukubhalisa kumahhala – uyodinga kuphela ikheli le-imeyili
Igama lakho lomsebenzisi kufanele lingafani namanye – uma omunye umsebenzisi eselisebenzisile igama, ngeke ukwazi ukulisebenzisa.
Uma useyenzile i-akhawunti yakho, igama lakho lomsebenzisi ngeke lisaguquka.
Uma ungumsebenzisi omusha, kuyodingeka wenze i-password. Ungayishintsha i-password yakho ekhasini lakho le-akhawunti
Ukuvikela umbhalo wakho Ezichazamazwini zakwa-Oxford ekuthini utholakale ngendlela engagunyaziwe, siphakamisa ukuthi usebenzise i-password enzulu.
I-password enzulu inezinhlamvu okungenani eziyi-7 ubude, enenhlanganisela yofeleba nonhlamvana, izimpawu, nezinombolo, futhi okungenalo igama lakho noma amagama esichazamazwi aphelele.
Siphakamisa ukuthi usebenzise i-password eyehlukile kwi-akhawunti yakho yakwa-Oxford kuleyo oyisebenzisela amanye ama-akhawunti akho e-inthanethi (isibonelo ukuthenga nge-inthanethi, ukubhenka, noma i-PayPal).
Uma usukhohlwe yi-password yakho, uzokwazi ukubuye uyenze kabusha lapha.
Cofa ‘ngena’ phezulu ekhasini lasekhaya noma ngena lapha ngokuthi ubhale igama lakho lomsebenzisi ne-password. Uma ungakabhalisile esayithini, uzobona isixhumanisi lapho ungenza khona kanjalo.
Ngikhohlwe yi-password yami / i-password yami ayisebenzi
I-password yakho yehlukanisa phakathi kofeleba nonhlavana, ngakho bheka ukuthi awucindezelanga INKINOBHO YOFELEBA. Uma ukhohlwe yi-password yakho, uyokwazi ukuyenza kabusha lapha. Uma ucofa isixhumanisi, kuyodingeka ubhale ikheli le-imeyili le-akhawunti yakho, isixhumanisi sokwenza kabusha i-password yakho siyobe sesithunyelwa kuwe nge-emeyili. Uma ungayitholi i-imeyili emizuzwini embalwa, bheka ifolda yakho ye-junk email noma i-spam email.
Olunye usuzo lungena
Uma ungakakwazi ukungena, ucelwa ukuthi usithinte.
Inqubomgomo yobumfihlo nesaziso somthetho